उच्च पीआर edu backlinks सूची कहाँ पत्ता लगाउने?
ईड डोमेनहरू वेबमा सबैभन्दा शक्तिशाली को रूपमा मानिन्छ. यस साइटबाट आएको ब्याकलिङ्कहरू लिङ्क गरिएको वेब स्रोतहरूमा धेरै अधिकार र मूल्य छ.
ईड ब्याकलिंकहरू लिङ्कहरू हुन् जुन उच्च-प्राधिकृत शैक्षिक वेब स्रोतहरूबाट आउँछन्. Google ले यस्ता लिंकहरू विश्वसनीय र अधिक प्राधिकरणको रूपमा आकर्षित गर्दछ र लिङ्क गरिएको डोमेनमा क्रेडिट प्रदान गर्दछ. अन्य शब्दहरूमा, धेरै गुणस्तर एडु ब्याकलिङ्कहरू हजारौं निम्न वा मध्य-गुणस्तर लिङ्कहरू भन्दा बढी तपाईँको साइटमा अधिक मान ल्याउन सक्छन्. उनीहरूले तपाईंको रैंकिंगलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा बढाउन सक्छन् र खोज परिणाम पृष्ठको शीर्षमा प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छन्.
एक नियम अनुसार डोमेनको रूपमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन र केवल ती व्यक्ति जसले शैक्षिक प्रतिष्ठा प्रमाणित गरेका छन् जसले एडु डोमेनहरूमा आफ्नो वेब स्रोतहरू निर्माण गर्न सक्छ।. यसबाहेक, एडू डोमेनको सबैभन्दा ठूलो मात्रा एकदम केहि समयको लागि भएको छ. लामो समयको लागि वेबमा अवस्थित वेब स्रोतहरू धेरै आगमन लिङ्कहरू र पछि उच्च पेजरङ्क छन्. यसैले यसले edu backlinks सूची सिर्जना गर्न समझदारी गर्दछ. मेरो लागि, Google ले edu डोमेनहरूको लागि सहयोग गर्दछ. तथापि, तपाईंलाई edu backlinks प्राप्त गर्न तपाईंको सामग्री, साइट अप्टिमाइजेसन र ब्रान्ड प्रतिष्ठा अन्तर्गत कडा मेहनत गर्न आवश्यक छ. यसैले शिल्प अनुसन्धान-आधारित शैक्षिक सामग्री र विश्वास गर्दछ कि खोजी इन्जिन अनुकूलन प्रयोजनका लागि केहि सम्मानित edu backlinks मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी मद्दत गर्न सक्छ कि तपाईं राम्रो रेट गर्न सक्नुहुनेछ।.
को सूची प्राप्त गर्ने तरिका एक वेबमास्टर्सहरूले विश्वास गर्छन् कि निःशुल्कका लागि एडु ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न लगभग असम्भव छ।. धेरै बाधाहरूले एडु ब्याकलिङ्कमा वेबमास्टरहरूले इनबाउन्ड लिङ्कहरू बनाउन अनुमति दिँदैन. सामग्रीसँग आउन गाह्रो छ, यो सबै आवश्यकताहरू पछ्याउन पीडादायी छ, र अन्य हास्यास्पद कारणहरू जुन वेबसाइट मालिकहरूलाई एडु लिङ्क निर्माण अवसरोंबाट टाढा राख्छन्।.
तथापि, वास्तवमा, सबै कुरा धेरै सजिलो छ. यदि तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छ भने, एडु ब्याकलिङ्कहरू जटिल नहुने छैनन्. यद्यपि, पहिला तपाईंले प्रभावकारी लिङ्क निर्माण रणनीतिको साथमा आउन र तिनीहरूलाई पछि जाने आवश्यकता छ. आउनुहोस् हामी तिनीहरूमध्ये केही छलफल गरौं.
यो शैक्षिक स्रोतहरू सहित कुनै पनि डोमेनबाट लिङ्कहरू प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्ररी तरिका हो।. Edu वेबसाइटहरू स्रोत पृष्ठहरूमा ठूलो छन्. वेबमास्टरहरूको लागि फाइदात्मक हुन सक्छ जुन तिनीहरू के गर्दैछन् थाहा पाउँछन्. तपाईलाई निश्चित लिङ्क निर्माण प्रविधि प्रयोग गर्नको लागि निश्चित निइक्सहरूमा निश्चित हुनुपर्दछ. उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको व्यापार फिटनेस उद्योगमा राखिएको छ भने, तपाईं यसको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ. Google क्वेरी प्रदान गर्नुहोस्, निम्न प्रश्नहरू प्रयोग गरी: "साइट:. edu fitness + inurl: resources, "" site:. edu slim diets + inurl: लिंक, "आदि. यस शोध गरेर, तपाइँ edu वेब स्रोतहरूको सूची प्राप्त गर्नुहुनेछ. तपाईंले यी वेबसाइट मालिकहरू वा प्रशासकहरूसँग सम्पर्क गर्न आवश्यक छ र विषयको बारेमा धेरै जानकारी सहित तपाईको सान्दर्भिक वेब स्रोतको बारेमा बताउन आवश्यक छ.
यो लिङ्क इमारत राम्रो छ, तर तपाईंलाई सजग हुनु पर्छ कि सबै मानिसहरु बाट तपाईंको पृष्ठ वा सामग्री टुक्रासँग लिंक हुनेछ।. त्यहाँ एउटा जोखिम हो कि वेबमास्टरहरूको महत्त्वपूर्ण प्रतिशत केवल तपाइँको प्रस्ताव छोड्नुहोस्. तथापि, यो यो विधि सरल छ किनकि यो पर्याप्त रूपमा लिन आवश्यक छ र धेरै समय लाग्दैन. यही कारणले तपाइँलाई यो लिङ्क व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक लिङ्क व्यवस्थापनको लागी एक जीत हो Source .